Tavoahangy polona nohomboana
Cap ho an'ny tavoahangy misy menaka manitra
Cap ho an'ny tavoahangy poloney sy borosy
Tube lokomena sy fantsom-boasary molotra
Hatramin'ny 2000, Nantong Global Packaging Products Co., Ltd. dia iray amin'ireo mpanamboatra fonosana kosmetika sy fanafody lehibe indrindra ao Haimen Nantong, Faritanin'i Jiangsu, Sina. Manolotra karazan-haingo fanodinana vokatra vita amin'ny vera isan-karazany izahay hahafahan'ny mpanjifa manavaka ny fonosany manokana.
Ny vokatray voalohany dia misy tavoahangy fitaratra manitra, tavoahangy poloney fantsika, ôtômanitra manitra ôtômanitra fanosotra, tavoahangy misy menaka manitra, tavoahangy fitaratra fantsona, satroka plastika, satroka aluminium, paompy, tavoahangy plastika ary karazan-tavoahangin-tsakafo sy zava-pisotro maro karazana.
Manana lafaoro 5 sy tsipika famokarana 15 izahay, vokatra mihoatra ny 1,5 tapitrisa isan'andro. Azontsika atao ny mamorona fonosana anao manokana, ao anatin'izany ny fahaizan'ny bobongolo tsy miankina, manasongadina ny toerana faran'izay tsara indrindra azo alaina ho an'ny fitiliana landy, fanamafisam-peo vita amin'ny volafotsy na volamena, fitifirana loko, fametahana asidra, sticker, famindrana hafanana, sns. Manolotra anao fomba vaovao sy samihafa izahay hihaonana amin'ny fonosana sy ny famoahana olana miaraka amina endrika namboarina. Ny ekipa mpamolavola anay dia mahay mametraka fanontaniana mety sy manolotra ny vahaolana tsara indrindra ilaina amin'ny famolavolana fonosana tsirairay miaraka amin'ny vidiny mifaninana. Izahay mitazona ny fitsipiky ny "kalitao voalohany" mba hanomezana fahafaham-po ny takian'ny mpanjifa marobe. Azo omena ny rafitra fanaraha-maso kalitao mivaingana. Raha atao teny iray dia manome serivisy mijanona tokana ho an'ny mpanjifa izahay.
Manatrika fampisehoana hatsaran-tarehy maro isan-taona izahay, toa ny Beautyworld any Dubai, Cosmoprof Las Vegas, Intercharm Beauty Fair any Russia, Cosmoprof Asia any HK, Viet Beauty any Vietnam sns. Avy amin'ireo tsena ireo dia mihaona amina namana vaovao marobe izahay ary ampahafantaro ny mpanjifa bebe kokoa hahafantatra anay.
Amin'ny maha iray amin'ireo mpamatsy fonosana lehibe indrindra miaraka amina matihanina amin'ity sehatra ity any Shina, dia efa manondrana ny entanay any amin'ny firenena maherin'ny 50 manerantany isika, toa an'i Pakistan, Russia, Poland, Argentina, Vietnam, Malaysia, USA, UK, Greece, Suisse ... Ny traikefa lava amin'ity sehatra ity sy ny fari-pahaizana avo lenta avo lenta no nitarika ny orinasanay ho laza malaza manerantany.
Fampisehoana hatsaran-tarehy any Las Vegas
Seho hatsaran-tarehy Rosiana Intercharm
Mpitantana ny varotra departemanta iraisam-pirenena: Jerry Ju